Nokupakishwa ring - China Wenzhou Dongyi Machinery
Gasket ring & oyile ring ize
Ukuqhagamshela ibandla ngentonga
Gasket ring & oyile ring ize (isangqa wiper)
inkampani yethu idibanisa uluhlu olubanzi ebuntsimbi and non-ebuntsimbi imathiriyeli kunye neentlobo lwezoyilo ukuhlangabezana neemfuno ivale eqhelekileyo ezininzi kwaye kananjalo nabo ngakumbi ngqo kunye yingxaki. Uluhlu lwezixhobo isebenzisa yethu yenkampani ziyafumaneka kulo lonke uluhlu olubanzi amakhonkco nokupakisha ezenzelwe uphawu oluthambileyo kwaye kumacala amabini, ofaka koxinzelelo eliphantsi ihlanjululwe negesi uphawu. Oku kuquka-high speed kunye amakhonkco aphezulu koxinzelelo, kwakunye isendwitshi isangqa kathathu zokwakha. Ba ...
inkampani yethu idibanisa uluhlu olubanzi ebuntsimbi and non-ebuntsimbi imathiriyeli kunye neentlobo lwezoyilo ukuhlangabezana neemfuno ivale eqhelekileyo ezininzi kwaye kananjalo nabo ngakumbi ngqo kunye yingxaki.
Uluhlu lwezixhobo isebenzisa yethu yenkampani ziyafumaneka kulo lonke uluhlu olubanzi amakhonkco nokupakisha ezenzelwe uphawu oluthambileyo kwaye kumacala amabini, ofaka koxinzelelo eliphantsi ihlanjululwe negesi uphawu. Oku kuquka-high speed kunye amakhonkco aphezulu koxinzelelo, kwakunye isendwitshi isangqa kathathu zokwakha.
Basic Ukupakisha Khala Designs:
Amakhonkco sokubambela itywina / ngababini Single
Double amakhonkco sokubambela itywina / ngababini
Ingcinezelo benza okuchasene
Pressure umaphuli kunye Slots isiqabu
Nokupakishwa Ring Imathiriyeli:
CPI Special Polymer aluminiyamu
Previous: pin crosshead
Okulandelayo: ring oli ize
3mm ucinezelo Springs
Auto Ukumiswa Spring
China Flat Ikhoyili Big okuwisa Force Spring
Coil ucinezelo Spring
Coil Springs For usofa
Ucinezelo Ikhoyili Spring
Down Ivula Gas Spring
Flat Ikhoyili Big okuwisa Force Spring
Isefu Steel Spring For emsileni Band
Gas Spring izihlalo Office
Gym Equipment Spring
Large Ikhoyili Springs
ezitshixwayo Gas Spring
Ezitshixwayo Gas Spring / Ukutshixa Gas Lift
Pocket Ikhoyili Springs
Asongwe Isefu Steel Spring For emsileni Band
Small Ikhoyili Spring
Ukonakala Power Spring
Steel Spring For emsileni Band
Ukungakhululeki Ikhoyili Springs
Toy ucinezelo Spring
ring oli ize
PTFE umcephe ring
Enifunda umcephe ring
No.12 Gangsheng yamdubula, Konggang New Area, Longwan weSithili, Wenzhou City
Esasifake isicelo saza safumana le reciprocatin ...